सस्तो SBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मार्ग मूल्यहरू | एक ट्रेन सेव
सस्तो SBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मार्ग मूल्यहरू
घर > सस्तो SBB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मार्ग मूल्यहरू
यहाँ तपाईं बारे मा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ सस्तो SBB ट्रेन टिकटहरू र SBB यात्रा मूल्यहरू र लाभहरू.
शीर्षकहरू: 1. ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा SBB
2. SBB को बारेमा 3. शीर्ष इनसाइट्स सस्तो SBB ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
4. SBB टिकट कति खर्च हुन्छ 5. यात्रा मार्गहरू: किन SBB ट्रेनहरू लिन उत्तम छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
6. मानक बीच के भिन्नताहरू छन्, दिन पास, र SBB मा सुपरसेभर 7. त्यहाँ एक SBB सदस्यता छ
8. SBB को प्रस्थान अगाडि कति लामो आगमन सम्म 9. SBB ट्रेन कार्यक्रम के हो?
10. कुन रेल स्टेशनहरू SBB द्वारा सेवा प्रदान गर्दछ 11. SBB FAQ
ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा SBB
को स्विस फेडरल रेलवे, SBB, स्विट्जरल्याण्डमा संचालित राष्ट्रिय रेल कम्पनी हो.
SBB ट्रेनहरू यूरोपमा राष्ट्रिय रेल प्रणालीहरूको माथि स्थानमा छन्, र भित्र 2017 यसको सेवाको गुणवत्ताको लागि पहिलो स्थानमा थियो, सुरक्षा रैंकिंग, र प्रदर्शन सूचकांक.
25 SBB द्वारा दैनिक आधारमा लाखौं यात्रीहरू यात्रा गर्छन्.
SBB ट्रेन सेवा संसारमा सब भन्दा समयनिष्ठ ट्रेन सेवाहरु मध्ये एक हो, भन्दा कम संग3औसतमा मिनेट 'ढिलाइ.
सबैभन्दा लामो SBB ट्रेन सुरुnel, गोथार्ड बेस सुरुnel्ग, मा स्विस आल्प्स, उपायहरु 57.1 किलोमिटर र एक विश्व कीर्तिमान सेट गर्दछ.
SBB छ3आधिकारिक भाषाहरू: जर्मन, फ्रान्सेली, र इटालियन. त्यसैले, SBB रेल स्टेशनहरू नाम अनुसार र स्थानीय अनुसार चिनो लगाइएको छ: दोभाषे शहरहरूमा स्टेशनहरूको नाम र संकेतहरू दुबै स्थानीय भाषाहरूमा छन्, र तपाईं किन कहिलेकाँही नाम देख्न सक्नुहुनेछ SBB CFF FFS.
SBB को बारेमा
SBB एक स्विस ट्रेन सेवा हो जुन विश्वमा एक उत्तम हो.
राष्ट्रिय स्विस SBB रेलवे कम्पनी स्विट्जरल्याण्ड भर मा संचालित, संग 798 रेलवे स्टेशन, र 721 ट्रेन टिकट बिक्री बिक्री. SBB रेलवे कम्पनी जनवरी १ बाट राज्यको स्वामित्वमा छ, 1999, यसको अर्थ संघीय राज्यले समात्दछ 100% सेयर को.
जाऊ त्यहाँ एउटा ट्रेन होमपेज बचत गर्नुहोस् वा खोजी गर्न यो विजेट प्रयोग गर्नुहोस् SBB का लागि टिकटहरू
शीर्ष इनसाइट्स सस्तो SBB ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
नम्बर 1: तपाईंको एसबीबी टिकटहरू यथाशक्य अग्रिममा पाउन सक्नुहुन्छ
SBB ट्रेन टिकट अनलाइन उपलब्ध छन् 60 तपाईंको यात्राको मिति भन्दा पहिले दिनहरू. जब तपाई ट्रेनको टिकट समय भन्दा अघि नै अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईले सस्तो टिकट पाउनुहुन्छ र सस्तो SBB ट्रेन टिकटहरू धेरै सीमित छन्. यसबाहेक, SBB ट्रेन टिकट मूल्यहरु आसमान छ तपाईंको यात्रा को दिन को दिन को रूप मा नजिक, त्यसो गर्न तपाईंको SBB ट्रेन टिकट खरीदमा पैसा बचत गर्नुहोस्, अग्रिम मा आफ्नो ट्रेन टिकट प्राप्त गर्नुहोस्. SBB ट्रेन टिकटमा पैसा बचत गर्न, चाँडै तपाईको टिकट किन्नुहोस्.
नम्बर 2: अफ-पीक अवधिको दौरान SBB द्वारा यात्रा
SBB ट्रेन टिकटहरू हुन् अफ-पीक अवधिमा सस्ता, हप्ताको सुरूमा, र दिन को समयमा. तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ सस्ता रेल टिकट हप्ता भित्र. मंगलबार, बुधवार, र बिहीबार, SBB ट्रेन टिकट सबैभन्दा किफायती छन्. को मात्राको कारण व्यावसायिक यात्री बिहान र बेलुका काममा आउँछ, ट्रेन टिकट बढी खर्च भयो. यसरी, यो दिउँसो र साँझको बीच कुनै पनि समय यात्रा गर्न सस्तो छ. हप्ताहरू रेलहरूका लागि अर्को शिखर अवधि हो, विशेष गरी शुक्रवार र शनिबार. SBB ट्रेन टिकट मूल्यहरु पनि बढ्छ सार्वजनिक बिदा र स्कूल बिदा.
नम्बर 3: SBB का लागि तपाइँको टिकटहरू अर्डर गर्नुहोस् जब तपाइँ तपाइँको यात्रा तालिकाको बारे निश्चित हुनुहुन्छ
SBB ट्रेनहरू उच्च माग मा छन्, र मात्र संग2प्रतिस्पर्धाको रूपमा अन्य रेल कम्पनीहरू, तिनीहरू हाल स्विजरल्याण्ड मा ट्रेन को लागी शीर्ष विकल्प रहन. तिनीहरूले ट्रेन टिकट प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूसँग छ कि टिकट विनिमय वा फिर्तीलाई निषेध गर्दछ जबसम्म यो व्यवसायको प्रकारको टिकट छैन।. जहाँसम्म अझै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो टिकटहरू दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ, SBB दोस्रो हात टिकट बिक्री को लागी अनुमति दिदैन. यसले कसरी तपाईंको पैसा बचत गर्दछ? तपाईको टिकट मात्र अर्डर गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ तपाईले दुई पटक एक टिकट बुकिंग गर्नबाट बचाउँनुहुनेछ किनकि केहि आयो र तपाईले मूल टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।.
नम्बर 4: तपाईंको SBB टिकटहरू सेभ ए ट्रेनमा खरीद गर्नुहोस्
एउटा ट्रेन सेभ गर्नुहोस् सबैभन्दा ठूलो छ, सबै भन्दा राम्रो, र युरोपमा ट्रेन टिकटको लागि सस्तो सौदा. धेरै रेल अपरेटरहरु संग हाम्रो कनेक्शन, ट्रेन टिकट स्रोतहरू, र हाम्रो टेक्नोलोजी एल्गोरिदमको ज्ञानले हामीलाई सस्तो ट्रेन टिकट सौदाहरूमा पहुँच दिन्छ. हामी केवल SBB को लागी सस्तो ट्रेन टिकट डील प्रस्ताव गर्दैनौं; हामी SBB को अन्य विकल्पहरूको लागि समान प्रदान गर्दछौं.
ल्योन बाटेल ट्रेन मूल्यहरू
ज्यूरिखदेखि बासेल ट्रेन मूल्यहरू
पेरिस बाटेल ट्रेन मूल्यहरु
लुसेर्न बाटेल ट्रेन मूल्यहरू
SBB टिकट कति खर्च हुन्छ?
एकल रेल यात्राको लागि एसबीबी टिकटहरू € १२.50० देखि माथि € १२ as सम्म सुरू हुन्छ. को एक SBB ट्रेन टिकटको मूल्य कस्तो प्रकारको टिकटमा निर्भर गर्दछ, गन्तव्य, र जब तपाइँ यात्रा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ:
मानक € १२.50० – € 35 € २। – €€
प्रथम श्रेणी € 50 – € € 50 – € १२।
यात्रा मार्गहरू: किन SBB ट्रेनहरू लिन उत्तम छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
1) तपाईं आइपुग्नुहुन्छ शहर केन्द्र. यो SBB ट्रेनहरूको एक फाइदा हो जब हवाईजहाजको तुलनामा. SBB ट्रेनहरू र सबै अन्य रेल यात्रा शहरको कुनै पनि ठाउँबाट अर्को शहरको बीचमा, केही फरक पर्दैन यदि यो छ भने प्रकृति रिजर्व वा गाउँ. यो तपाइँको समय र एयरपोर्टबाट शहरको केन्द्रको लागि ट्याबको लागत बचत गर्दछ. ट्रेन बिसौनी संग, यो सहरको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सजिलो छ जुन तपाईं जानु भएको थियो. तपाईं कहाँबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेले खास फरक पार्दैन, जेनेभा, बेसल, जर्मेट, वा ज्युरिख, सिटी सेन्टर स्टप एसबीबी रेल का एक प्रमुख लाभ हो!
2) हवाइजहाज बाट यात्रा को लागी तपाईको एयरपोर्टमा कम्तिमा तपाईको उडान समय भन्दा केहि घण्टा अगाडी हुनु पर्छ. विमानमा चढ्नु अघि तपाईंले सुरक्षा जाँचहरू पार गर्नुपर्नेछ. SBB ट्रेनहरूको साथ, तपाईं बस स्टेशन मा हुनु पर्छ एक घण्टा भन्दा कम अग्रिम र कहिलेकाँही कम पनि. जब तपाइँ यो समयलाई पनि विचार गर्नुहुन्छ जब तपाईंलाई एयरपोर्टबाट शहरको बीचमा यात्रा गर्नको लागि लिन्छ, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि SBB ट्रेनहरू कुलको सर्तमा उत्तम छन् घुम्ने समय.
3) सतह मा, SBB ट्रेन टिकटको मूल्य बजेट एयर टिकट भन्दा बढी महँगो देखिन्छ. तथापि, जब तपाईं समावेश सबै शुल्क तुलना गर्नुहुन्छ, SBB ट्रेन टिकट एक राम्रो मूल्य सम्झौता छ. सामान शुल्क जस्तै अन्य लागतहरूको साथ जुन तपाईंले रेलहरूमा भुक्तान गर्नु पर्दैन, SBB द्वारा यात्रा गर्दै सबै भन्दा राम्रो छ.
4) ट्रेनहरू वातावरण मैत्री छन्. रेल र हवाइजहाज बीचको तुलनामा, ट्रेनहरू सधैं माथि आउँथे. हवाइजहाजले कार्बनको उच्च स्तर र उनीहरूले छोड्ने को2 सँग पृथ्वीलाई ठूलो प्रदूषण गर्दछ. तुलना प्रयोगमा ट्रेनहरू धेरै कम कार्बन पदचिह्न हवाइजहाज भन्दा.
Chur to Thatis ट्रेन मूल्यहरु
ज्यूरिखदेखि चुर ट्रेन मूल्यहरू
जिनेभा चुर ट्रेन मूल्यहरू
मानक बीच के भिन्नताहरू छन्, दिन पास, सेभर डे पास, र SBB मा सुपरसेभर?
SBB सँग विभिन्न बजेटहरू र यात्रुहरूको प्रकारहरूको लागि विभिन्न प्रकारका टिकटहरू छन्: यो व्यापार हो वा फुर्सत. तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यी मध्ये एउटा टिकट तपाईंलाई उपयुक्त छ.
मानक SBB टिकटहरू:
को SBB मानक टिकट सबै SBB टिकटहरू मध्ये सबैभन्दा लचिलो छ. यो ट्रेन टिकट पोइन्ट-पोइन्टको लागि हो 1 मार्ग वा राउन्डट्रिप्स. अर्को शब्दमा, SBB मानक टिकट क्लासिक ट्राभेलकार्ड हो. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो ट्रेन टिकट तपाईंले खरीदको समयमा छनौट गर्नुभएको सम्पूर्ण दिनको लागि मान्य छ, र सम्म5अर्को दिन. साथै, तपाईं पहिलो र दोस्रो कक्षाको लागि एक SBB पोइन्ट-टू-पोइन्ट टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस पोइन्ट-टु-पोइन्ट टिकटको अर्को ठूलो फाइदा भनेको बच्चा नहुँदासम्म6नि: शुल्क यात्रा. अर्को शब्दमा, तपाईं जहाँसुकै भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको इच्छा र कुनै कक्षामा, A बाट B सम्मको तपाईंको यात्रामा.
SBB दिन पास र सेभर डे पास टिकटहरू:
सेभर डे पास यात्रा कार्डको साथ, तपाई प्रति यात्रा २ as डलर जति तिर्न सक्नुहुन्छ. डे पास पास टिकट मात्र उपलब्ध छ यदि तपाईं तिनीहरूलाई अग्रिम प्राप्त गर्नुभयो, तिनीहरू रेल स्टेशनमा उपलब्ध छैनन्, सके सम्म छिटो 60 तपाईंको प्रस्थान मिति भन्दा पहिले दिनहरू. तपाईं यात्रा को एक दिन पहिले यस प्रकारको ट्रेन टिकट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. यसबाहेक, सेभर डे पास टिकट डु boats्गाका लागि मान्य छ, बसें, वा ट्राम यात्रा.
SBB सुपरसाभर टिकटहरू:
यो टिकट वर्ग मानक SBB ट्रेन टिकट जत्तिकै लचिलो छैन, तर अन्य ट्रेन टिकटहरू भन्दा सस्तो. सुपरसेभर SBB टिकट सम्म प्रदान गर्दछ 70% मानक टिकटहरूमा छुट. मानक ट्रेन टिकटको विपरित, यस प्रकारको टिकटले A बाट B सम्म खास यात्रामा सबैभन्दा कम भाडा प्रदान गर्दछ. अर्थ, तपाईं कुनै पनि स्टेशनमा मा वा बन्द हप गर्न सक्नुहुन्न, स्टेशनहरु बाहेक तपाईले प्रि-बुक गर्नु भएको छ.
डे पास यात्रा कार्डले तपाईंलाई यात्राको मितिमा लचिलोपन प्रदान गर्दछ. अर्को शब्दमा, तपाईले चाहानु भएको कुनै पनि समय यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्थान मिति को दिनमा.
बर्न ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरु
त्यहाँ एक SBB सदस्यता छ?
केवल स्थानीय नागरिकहरूले GA ट्राभेलकार्ड किन्न सक्छन्, जुन सबै चीजको लागि एक कार्ड हो. GA ट्राभेलकार्ड वैध छ सबै सार्वजनिक यातायात स्विजरल्याण्ड मा.
तपाईं यसलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ:
– SBB टिकट काउन्टर.
– SBB स्थानीय ग्राहक सेवामा 848 44 66 88
– SBB रेल र बसहरूमा स्टाफबाट.
Familia GA ट्रेवलकार्ड
बच्चाहरू र उमेर सम्म युवा वयस्कहरू 16 र तिनीहरूका अभिभावकहरूले फेमिलिया जीए ट्राभेलकार्डमा छूटको मजा लिन सक्छन्. यो कार्ड उपलब्ध छ यदि कम्तिमा परिवारको एक सदस्यसँग यो SBB ट्राभेलकार्ड छ.
Familia GA का सबै धारकहरु अन्य GA ट्राभेलकार्डको लागि घटाइएको मूल्यहरुको मजा लिन्छन्. साथै, एउटा परिवारले निर्णय गर्न सक्दछन् कि यदि उनीहरू पहिलो वा दोस्रो कक्षाको लागि फेमिलिया जीए खरीद गर्न चाहन्छन्.
सेवन २25। ट्राभेलकार्ड
जब तपाईं 25 यो सबै रमाइलोको बारेमा छ, र अब सात25 कार्डको साथ, तपाईं असीमित यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ7बजे. अर्थ, यो ट्राभेलकार्ड बीचमा मान्य छ7बेलुका5छु. त्यसैले, यस्ले कसरी काम गर्छ? सातौं २ तपाईंको स्विस पास यात्रा कार्डमा लोड गरिएको छ र तपाईं यसलाई कुनै पनि स्टपको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
इन्टरल्याक्ड ट्रेन मूल्यहरूमा बसेल
जेनेभा टु Zermatt ट्रेन मूल्यहरु
Bern लाई Zermatt ट्रेन मूल्यहरु
Lucerne को Zermatt ट्रेन मूल्यहरु
SBB को प्रस्थान अगाडि कति लामो आगमन सम्म?
तपाइँको SBB प्राप्त गर्न र ठीक समयमा हुनुहोस्, रेलवेले सिफारिश गर्दछ कि तपाईं कम्तिमा आइपुग्नुहोस् 1 एक घण्टा पहिले तपाईंको SBB ट्रेन प्रस्थान अघि. हामी SBB को ट्रेनहरूमा धेरै यात्रा गरेदेखि हामी ट्रेन बचाउनमा छौं, पुग्न पनि सिफारिस गर्नुहोस् 30 मिनेट अग्रिम, त्यसोभए रेल पक्रन तपाईलाई विशाल रेल स्टेशनहरूको माध्यमबाट हतार गर्नु पर्दैन. साथै, एक घण्टा को लागी पसलहरु र खाद्य स्ट्यान्डहरु र मद्दत गर्न को लागी पर्याप्त समय को लागी पर्याप्त छ ट्रेन यात्रा सकेसम्म सजिलो हुन.
SBB ट्रेन कार्यक्रम के हो??
तपाईं वास्तविक समय मा हाम्रो होमपेज मा ट्रेन बचाउन मा पाउन सक्नुहुन्छ. केवल तपाईंको हालको स्थान र इच्छित गन्तव्य टाइप गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई ट्रेनको तालिकाको लागि अपडेट गरिएको जानकारी देखाउनेछौं.
कुन रेल स्टेशनहरू SBB द्वारा सेवा प्रदान गर्दछ?
त्यहाँ सकियो 10 स्टेशनहरु SBB रेल सेवाहरु द्वारा सेवा.
SBB को ज्यूरिख स्टेशन ज्युरिच केन्द्रीय स्टेशन हो (स्थानीय नाम ज्यूरिख एचबी हो). यो ज्यूरिखको सब भन्दा ठूलो SBB ट्रेन स्टेशन हो र यो ज्यूरिचको मुटुमा अवस्थित छ, नजिकै नदी सीमा.
बर्न स्विट्जरल्याण्डको राजधानी शहर हो र ला Lang्ग्से क्वार्टरमा बर्न विश्वविद्यालयको नजिकैको ट्रेन स्टेशन हो.
आजकल जेनेभामा SBB ट्रेनहरू प्रस्थान र जिनेभा सेन्टरल स्टेशन बाट आइपुग्नुहोस्, शहरको बीचमा.
बेसल SBB स्टेशन यूरोप मा सबैभन्दा ठूलो सीमा स्टेशन हो. त्यो भनेको स्विजरल्याण्डबाट हो, तपाईं जर्मनी यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रान्स, अस्ट्रिया, र नेदरल्याण्ड्स SBB ट्रेन सेवा संग. सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, छन् 50 पसल र बसेल स्टेशनमा रेष्टुरेन्टहरू, जहाँ तपाईं यात्रा को लागी आवश्यक सबै चीज को लागी खरीद गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरण को रुपमा, तपाईं खाजा र अन्तिम मिनेट स्मारिका खरीद गर्न सक्नुहुनेछ. बासेल SBB स्टेशन बाट, र तपाई यात्रा गर्न सक्नुहुने प्रमुख स्टेशनहरू फ्रान्कफर्ट हुन्, पेरिस, र साल्जबर्ग.
बाइक बोर्डमा अनुमति छ SBB ट्रेनहरू?
बाइकलाई SBB ट्रेनहरूमा अनुमति छ. तपाईं स्टेशन मा उनीहरूको लागि टिकट किन्न सक्नुहुन्छ, र बाइकलाई लग्गेजको रूपमा दर्ता गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई हात लगेजको रूपमा ट्रेनमा लैजानुहोस्.
बच्चाहरू SBB ट्रेनहरूमा निःशुल्क यात्रा गर्छन्?
हो केहि केसहरूमा, छ वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको साथ नि: शुल्क यात्रा. साथै, छ वर्षको उमेरका बच्चाहरू, र तिनीहरू सम्म 16 आधा मूल्य को लागी जन्मदिन यात्रा.
SBB ट्रेनहरूमा घरपालुवा जनावरहरूलाई अनुमति छ?
हो, कुकुरहरूलाई अनुमति दिइन्छ जबसम्म तिनीहरू यात्री क्रेट वा सामान भ्यानमा यात्रा गरिरहेका छन्.
SBB का लागि बोर्डिंग प्रक्रियाहरू के हुन्??
तपाई कमसेकम स्टेशनमा आइपुग्नु पर्छ 1 तपाईंको ट्रेनको प्रस्थान समय भन्दा एक घण्टा अघि, र प्रमाणित गर्न टिकट निरीक्षकलाई आईडी देखाउनुहोस्.
सर्वाधिक अनुरोध गरिएको SBB FAQ – के म एसबीबीमा अग्रिम सिट आरक्षित गर्न सक्छु??
तपाईं सक्छ रेल मा आरक्षण एक मलाई थाहा छमा अग्रिम को लागि5यात्रुहरू प्रति सीट € of को मूल्यमा. तथापि, आरक्षण एक व्यक्तिको नामको अन्तर्गत हुनुपर्दछ जुन यात्रा गर्दैछ.
त्यहाँ SBB भित्र Wi-Fi सेवा छ??
हो. तपाईं रमाउन सक्नुहुन्छ मुक्त वाइफाइ सबै SBB ट्रेनहरूमा सेवा र सबै यात्रा वर्गहरू सम्म 60 मिनेट.
यदि तपाईंले यो पोइन्ट पढ्नु भएको छ भने, तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ तपाइँको एसबीबी रेलको बारेमा जान्न आवश्यक छ र तपाइँको एसबीबी रेल टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ एक ट्रेन सेव.
के तपाइँ यस पृष्ठलाई तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sbb%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल), वा तपाइँ केवल यस पृष्ठमा सीधा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ.